Rakkoo nageenyaa Yunivarsiitii Woldiyaa: Yunivarsiitiiwwan keessatti barumsi adda cite, waraanni bobbaafame - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright Dambi Dolloo University
Ajjeechaa fi reebicha Yunivarsiitii Waldiyaatti Sambata darbe raawwateen duuba Yunivarsitii Dambi Doollootti barataan tokko meeshaa qara qabuun waraanamee lubbuun isaa darbe.
Barataan kun Wiixata darbe galgala naannoo sa'aatii tokkootti nama hin beekamneen waraanamee lubbuun isaa darbite jedhan preezidantiin itti aanaa Yunivarsiitichaa Dr. Bulii Yohannis.
Taateen kun raawwachuu duras isaan boodas, walitti bu'iinsi akka hin turre Dr. Buliin dabalanii nutti himaniiru.
Ajjeechaa yuunivarsiitii Waldiyaatti raawwateen booda Yunivarsiitilee Naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessa muddamni jiraachuu barattootniifi aanga'ootni Yunivarsiitilee dubbifne ni himu.
Yunivarsiitii Madda Walaabuutti Wiixata ganama walitti bu'iinsa barattoota naannoo Oromiyaa fi Amaaraa gidduutti dhalateen barattoota 9 ta'an irratti miidhaan qaqqabuu pireezidantiin Yunivarsiitiichaa Dr. Abuubakar Kadiir BBC'tti himaniiru.
Yunivarsiitiiwwan Wallaggaafi Amboottis barattootni daree gallee hin barannu jechuu fi qaamolee nageenyaan eegumsi cimee jiraachuu barattootni Yunivarsiitiiwwan kanarraa gaafanne nutti himaniiru.
Rakkkoo yuunivarsitiiwwan keessatti dhalate kana tasgabbessuuf korri bittinneessaa Oromiyaa, Poolisiin Federaalaafi miseensonni Raayyaa ittisa biyyaa gara mooraa yuunivarsiitilee kanneenii bobbaafamuu barattoonni fi aanga'oonni BBC'tti himaniiru.
Haa ta'u malee sodaa jiruu irraa kan ka'ee barattoonni walitti qabamanii gariin ammoo manneen amantaatti baqatanii akka jiran odeeffanneerra.
Barataa Yunivarsitii Wallagaa waggaa 2ffaa tokko humnoonni nageenya gamoo yunivarsiticha 610 jedhamu keessa Dilbata erga buufatanii barattooni miira rifannaa keessa jiru jedha.
Yunivarsiticha keessa humni meeshaa baatu barataa walqixa waan socho'uuf barattoonni hedduun sodatanii gariin gara maatii isaani magaalaa birootti deebi'an jiru jechuun barataan kun ni hima.
Yunivarsitichaatti Barataa waggaa 3ffaa kan ta'e biraan, dhiyeenya gocha Yunivarsiitii waldiyaatti uumameen barattoonni hedduu dheekkamuu hima.
Haa ta'u malee sababa komaandi poostiin jiruun hiriira nagaa ba'uu akka hin dandeenye dubbata.
Ta'us barattoonni nyaata lagachuun mufannaa isaanii ibsachaa jiru jedhe.
"Utuu obboleessi keenya du'aa jiru, utuu oboleessi keenya rakkoo keessa jiru nuti akkamiin nyaata dhiigaan makame nyaanna jenne guyyaa kaleessaa laaqana dhiisuun barattoonni hundi gadda keenya ibsanneerra," jedha barataan kun.
Yunivarsiticha keessatti waldhabdeen barattoota saba biraa waliin uumame akka hin jirres barataan kun himeera.
"Humni jiru si doorsisa, si rifachiisa, jireenya birrannaa jiraatta malee jireenya bilisummaa qabu hin jiraattu," jedha.
Barsiisaan yunivarsiitichaa dubbisne tokko yunivarsitiirraa deebiin komii barattootaa irraa ka'eef keenname akka hin jirree fi baruu fi barsiisuun adda citee akka jiru himeera.
"Nuti barsiisotni barsiisuuf qophiidha. Hojii idilee keenyarra jirra haa ta'uu malee barataan tokko kan inni tasgabbaa'ee barachuu danda'u yoo xinsammuun haalaafi naannoo tasgabba'ee keessa yoo ta'edha" jedha.
Yunivarsiitii Finfinneettis barattoonni nyaata lagachuu miidiyaalee hawaasaarratti maxxanfameera.
Skip Facebook post by Sabontu
Barattoonni Yuuniversiitii Finfinnee obbolaa keenya miidhamaa jiraniif haala kanaan nyaata lagannee gaddaaf mormii keenya ibsanneerra ... Fitih le barattoota Oromoo
Posted by Sabontu Enkossa Namo on Tuesday, 12 November 2019
End of Facebook post by Sabontu
Kibxata magaala Waldiyaa keessatti hiriirri haleellaa barattoota Oromoorratti raawwatame balaaleffatu gaggeefame akka ture barataan Yunivarsiitichaa tokko BBC'tti himeera.
Haa ta'u malee ammallee eegumsa qaamolee nageenyaa federaalaan socho'aa jirraa jedha barataan kun.
''Ammallee sodaannee bakka tokkotti heddummaannee walitti qabamnee jirra, nuti ammallee fedhiin keenya gara maatii keenyaatti deebi'uudha" jedha.
"Garuu yuunivarsitiin gadi nu dhiisuu dide. Karaa deemuus sodaanneerra. Amma fala dhabnee jirra'' jechuun soda qaban BBC'tti himeera.
''Kaleessa qaamoleen barattoota mariisisan nageenya moorichaaf akka dhaabbatan dubbatanii akkuma ba'aniin gareen haleellaa gaggeessee ture ammas irra deebi'uun hiriira ba'uun dhaadachaa turan'' jedha barataan kun.
Mooraa yunivarsitichaa keessa raayyaan ittisa biyyaa, poolisiin federaalaa fi humni addaa naannoo Amaaraa baay'inaan socho'aa jiraachuus dubbata.
"Wiixata galgala barattoonni Oromoo lama osoo uffata miiccame ol galfachuuf deemanii dhagaadhaan mataa baqassan," kan jedhu barataan kun.
''Ammallee haleellaan yoom nurra ga'a jechaa ofirratti eegaa jirra,'' jedha.
''Hojin baruu fi barsiisuu akka hin jirree fi barattoonni Oromoo yeroo ammaa bakka tokkotti gurmaa'uun qe'eetti deebi'uuf gaaffii itti fufnee jirra'' jedheera.
"...mootummaan itti gaafatamummaa fudhachuu qaba"
Waldhabdee Sambata darbe yunivarsiitii Waldiyaatti uumameen barataa Oromoo lubbuun darbe keessaa tokko dhalataa Godina Baalee aanaa Gindhiir Hasan Amiin Hasani.
Abbaan isaa Obbo Amiin mucaan isaanii kan Yunivarsiitii Waldiyaatti ajjeefame kuni gaafa Abbaan kiyya du'u waan dhalateef maqaa Abbaa kiyyaatinan moggaase jedhan.
Ilma kiyya mootummaa federaalaa abdadheen yuunivarsitiitti erge kan jedhan abbaan Hasan ''gochaa suukanneessaa ilma kiyyarratti raawwatame kanaaf mootummaan itti gaafatmummaa fudhachuu qaba" jedhan.
Ajjeechaa ilma isaaniirratti raawwateen kan gadduu qabu saba Oromoo mara jedhu Obbo Amiin.
"Mucaa kiyyallee reeffa naafidani awwaalladhe. Reeffa isaatuu ijoolleen naafidde nabsee isaanii qabsiisaniiti kan achii asiin naaf gahan.
Ammayyuu garuu ilmaan Oromoo Yunvarsiitii Waldiyaa sana keessatti dararamaa jiru. Ijoolleen tunniin dafanii dhaqqabamuu qabu," jedhan.
Mucaan isaanii kuni amantaa Islaamummaa fi barumsa addunyaattillee barataa cimaa akka tures himu.
Yuunivarsitii Aksuumiitti barataan tokko ajjeefamee hedduun madaa'an